चैत्र २३ गते तपाईंको लागि कति शुभ छ ? हाेला हेर्नुस् आजको राशिफल::देश र जनताप्रति समर्पित
चैत्र २३ गते तपाईंको लागि कति शुभ छ ? हाेला हेर्नुस् आजको राशिफल
ज्योतिष सरोज घिमिरे
१९४० बि.स. २०७५ साल चैत्र २३ गते शनिबार इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ६तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथी १५ः०६ बजे सम्म पश्चात द्वितीया तिथी रेवती ७ः१८ बजे सम्म पश्चात अश्विनी नक्षत्र वैधृति योग वव करण चन्द्रमा मीन राशिमा ७ः१८ बजे सम्म पश्चात मेष राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग सुर्य उत्तरायण वसन्त निमको पात खाने र तेल लगाउने (तैलाभ्यंग) सांस्कृतिक दिवस, चोभारमा आदिनाथ–स्नान, भद्रकाली पीठमा लिङ्ग पातन गर्ने ‘परिधावी’ नव संवत्सर प्रारम्भ, बैतडीको गुजर, बनारसी मन्दिरमा कोटिहोम मेला प्रारम्भ
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ्
शारीरिक आलस्यताले कार्य सम्पादनमा ढिलाई उत्पन्न गराउन सक्नेछ । गैर ब्यत्तित्व सगँको सम्बन्ध उत्तम नरहला । पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा नयाँकार्यको प्रारम्भ हुने योग रहेको छ । स्वास्थ समन्धी सामान्य समस्याले सताउन सक्नेछ ।
अनावश्यक खर्चको सम्भावना रहेको छ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
गैर बिश्वसनिय कुराको पछि लाग्नाले कार्यमा झमेला उत्पन्न हुनेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला ।
मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । कुराकाट्ने ब्यक्ति हरुबाट भने सजग रहनु होला ।
बाणिका कारण आफन्त जनहरु रुष्ट रहनेछन । पठनपाठनमा राम्रो समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । खराब संगतका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण अपजस आईपर्ने सम्भाबना रहेको छ
असार ५ गतेको राशिफल, तपाइको दिन कस्तो रहनेछ
जेष्ठ २१ गतेकाे राशिफल, कुन राशिका लागि कति ? शुभ हेर्नुस्
आज बैसाख १५ गतेकाे राशिफल कुन राशिका लागि कति शुभ छ ? हेर्नुस्
चैत्र ३० गते कुन राशि कति शुभ छ ? हेर्नुस् आजको राशिफल